Home3- JobExpress
Business Plan For 2021 January 14, 2021
လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဝန်ထမ်းကြားက Internal Recruitment January 6, 2021
အလုပ်လုပ်ရင်း အိပ်ငိုက်လာရင် ဘာလုပ်မလဲ? January 5, 2021
အလုပ်မသွားခင် လုပ်သင့်တဲ့အရာများ January 5, 2021
4 Things to do on New Year December 31, 2020
ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ အရင်ကထက် အလုပ်အကိုင်ရရှိဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းသွားနိုင်တာမို့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ သူများထက် နှာတစ်ဖျား သာအောင် ဘယ်လိုအရာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်၊ လေ့လာထားသင့်တယ်ဆိုတာကို အရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်။ သူများတွေလို ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအနေနဲ့ Online Shopping ပဲလုပ်ရတော့မှာလား? သင်တန်းတွေပဲဆက်တက်ရမလား? ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အထိပဲစောင့်ရတော့မလား?...
Business တစ်ခု တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ အတွေးအခေါ်idea အသစ်တွေက အရေးပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ‌ လူတွေအမြင်မှာ အမြဲတမ်းတွေးနေတယ်ဆိုတာက အချိန်ဖြုန်းတယ်လို့ထင်ပါသလား? ကိုယ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်က ထူးခြားနေမယ်ဆိုရင် သူများတွေထက် ခြေတစ်လှမ်းသာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်‌တော်တို့အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို စပြီးလေ့လာသင်ယူတဲ့အချိန်က အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို...